Baahin: Arbaca, Mar 14, Axmed M. Jookar ~ Daljir ~ Bossaso. Qarax khasaare lixaad leh gaystay oo ka dhacay madaxtooyada Villa Somaliya; M/weyne Faroole oo la kulmay odayaasha dhaqanka ee laba ardaa oo hore ugu dagaalamay gobolka Karkaar; Dr. C/llahi Cali Warsame oo guddoonsiiyey cisbitaalka guud ee Dhahar, Haylaan agab caafimaad; Khuburo sheegtay in shidaalka Puntland laga dhaxli karo dhaqaale lixaad leh haddii si mudan loo maareeyo. – Radio Daljir
Maarso 14, 2012 12:00 b 0
Baahin: Salaasa, Mar 13, Maxamed C. Kooshin ~ Daljir ~ Garowe. Gaagaab oo sharci darro ku tilmaamay ergada 480-ka ee ansixinaysa dastuurka Puntland, ugana digay M/weyne Faroole xilli kororsi; Khaatumo oo beenisay in dawlada federaalku ay aqoonsiga kaala laabatay; AMISOM oo sheegtay in ay Al-shabaab ka xorayn doonaan Somaliya oo dhan; Wasaarada qorshaynta ee Puntland oo soo bandhigtay waxqabadka Puntland ee sannadahan dambe.